ကဲ Guitar လက်ကွက် မကိုင်တတ်သူများနှင့် လက်ကွက် မသိသူများ ဒီ program လေးထဲမှာ လက်ကွက်ပေါင်း တစ်သန်းကျော်ပါပါတယ် . ကမ္ဘာမှာ ရှိရှိသမျှ လက်ကွက် အကုန်လုံးပါပါတယ် . ဂစ်တာ အတီး တတ်ချင်သူများ . လက်ကွက် မသိသူများနှင့် တစ်ခြား ဂစ်တာဝါသနာ ရှင်များ အားလုံး လေ့လာနိုင်ပါတယ် . လက်ကိုင်ပုံ ကိုင်နည်းလဲ ပါပါတယ် .
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 5:15 AM
win June 10, 2012 at 8:50 PM
ွှအကိုရေတင်ပေးတာတော့ ကျေးဇူးပါပဲ ဗျာ လက်ကွပ်တွေက မမှန်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ကမသိလို့ လား ကော့ တွေကမြင့် လို့လား မသိဘူး ။